Ilaaliyaha Gobolka Sanaag Oo Ka Hadlay Dacwaddo Ay Ka Fuliyeen Ceel-Afweyn | Saxil News Network
Ilaaliyaha Gobolka Sanaag Oo Ka Hadlay Dacwaddo Ay Ka Fuliyeen Ceel-Afweyn
Ceel-Afweyn (Saxil News.com ): Gar-soorka Gobolka Sanaag ayaa degmadda Ceel-Af-weyn ee Gobolka Sanaag ka bilaabay dhegaysiga dacwaddo iyo kiisas kala duwan oo halkaasi mudaba ka taagnaa, waxaanay guddo-galeen 3-dacwadood oo ciqaab ah.
iyagoo xukuno kala duwan ku riday eedaysanayaashii dacwadahaasi loo haystay, ka dib markii ay dhiegaysteen dacwadda kiisaskooda, halka kuwii wax lagu waayayna la siidayay, sida uu noo xaqiijiyay xeer ilaaliyaha Maxkamadda Gobolka Sanaag, Yaasiin Maxamuud Jaamac oo shalay khadka telefoonka nagula soo xidhiidhay isagoo ku sugan degmadda Ceel-Af-weyn ee gobolka Sanaag.
Xeer Ilaaliyaha gobolka Sanaag, waxa kale oo uu intaasi ku daray in wefti ka kooban saddex xubnood oo ah gar-soorka gobolka Sanaag oo uu hogaaminayay guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Sanaag oo ay wehelinayeen Guddoomiyaha Maxkamadda Racfaacanka ee Gobolka Sanaag, iyo Xeer Ilaaliyaha gobolka Sanaag in ay socdaal ku tegeen magaaladda Ceel-Afweyn si ay u soo gebagabeeyaan dacwadahaasi kala duwan.
Waxaanu sheegay in shan kiis oo ahaa dacwaddo madani ah oo yaalay degmadda Ceel-Af-weyn inay saddex ka mid ah guddo-galeen, halka labadda hadhayna ay manta ay guddo-gelayaan dhegaysigooda, kuwaasi oo ah kufsi, shantaasi dacwadood waxay ahaayeen kuwa ciqaabta ah, halka Maxkamadda racfaankuna ay guddo-gashay laba dacwadood oo madani ah oo u yaalay magaalada Ceel-AF-weyn, kuwaasi oo midkood ay go’aan ka gaadhay halka ta kalena ay mudaysay.
Xeer ilaaliye Yaasiin oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Anagoo wefti ah kana kooban garsoorka gobolka Sanaag oo u soconay dacwaddo yaalay degmadda Ceel-Af-weyn, Maxkamadda wareegta (mobile cord), waxaananu ka koobnayn Guddoomiyaha Maxkamadda Racfaacanka ee Gobolka Sanaag, Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Sanaag iyo Xeer Ilaaliyaha oo aniga ah, shalay (doraad) waxaanu guddo-galnay laba dacwadood, oo ciqaab ah, dacwadaha ciqaabtu shan ayay ahaayeen.
Dadka dacwadahaasi lagu soo oogayna waxay ahaayeen 16 eedaysane, kiis wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo Darar-weyne, oo baabuur ayaa jidgooyo loo galay, 3-nin ayaa u galay 3-na way caawisay, lix ayay halkaasi noqdeen, lixdaasi nin afar ayay ciidanka boolisku gacanta ku soo dhigeen, lixdiiba waa la xukumay afarta joogay iyo labadii maqnaaba wuxuu dhacay 3-dii bishii afraad ee sanadkan”.
Waxaanu intaasi ku daray “Kiiska labaad waxa uu ka dhacay meesha la yidhaahdo Huluul, niman ilaa tobaneeyo ah, oo kuray u badnaa ama dhallinyarro ah, ayaa waxa ka hor yimaadeen maamulka iyo booliska degmadda Gar-adag, dhaawacyo ayaanay u gaysteen, tobankii danbiile shan ka mid ah ayay boolisku markii danbe gacanta ku soo dhigeen waana la xukumay tobankiiba, shantii joogay iyo shantii maqnaaba, labadaa kiis shalay ayay maxkamadda gobolku dhegaysatay.
Maanta toddobadii subaxnimo ayaanu bilownay Maxkamadda, waxaana la horkeenay Maxkamadda 31 maxbuus, oo ah dad dhallinyarro ah, oo isagu jiray, da’doodu u dhaxaysay 17 ilaa 22 jir, kuwaasi oo loo haysto inay rebshad ka sameeyeen magaaladda Ceel-Af-weyn xilliyadda habeenkii ayay shied bilaabayaan oo ay magaaladda rafacayaan, oo waa laga seexan waayay, waana kooxo 31 ayaa la qabtay oo maanta maxkamadda la horkeenay, 3 maqnana waa la soo eedeeyay, 34 kaasi eedaysane lix ka mid ah waxba waa lagu waayay, 28 kalena waa la xukumay” ayuu yidhi Yaasiin Maxamuud.
Xeer Ilaaliyaha oo ka hadlayay, waxa lagu kala xukumay 28-ka dhallinyaradda ah, waxa uu yidhi “Midkiiba waxaa lagu xukumay 2 bilood oo xiadhig ah iyo saddex boqol oo ganaax ah, kuwa hore waxaa lagu xukumay qaarkood 2 sano iyo 2 milyan oo ganaax ah, qaarna sanad xadhiga h iyo milyan ganaax ah, berina laba dacwadood ayaa noo mudaysan, oo aanu guddo-gelaynaa, dhegaysigooda, laba maxbuus ayaana u xidhan. Maxkamadda Rafcaankuna 2 dacwadood oo madani ah ayay gashay , inta aan ogahayna mdi go’aan ayay ka gaadhay, mid kalena way mudaysay, labadii biloodba mar ayaanu nimaadnaa Ceel-Af-weyn oo aanu dacwadaha dhegaysanaa, iyada iyo Gar-adag iyo Maydh, wixii ka baxsan magaalada Ceerigaabo”.
Dhinaca kale xeer ilaaliyuhu mar uu ka hadlayay, noocyadda kiisaska ama danbiyadda ugu badan ee ka dhaca gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceerigaabo, waxa uu yidhi “Dacwadaheeda iyo kiisaskuba way badan yihiin, dacwadaha ciqaabta kolay waxaa la isaga horyimaadaa waa sareyaasha dhulka ayaa la isaga hor yimaadaa, oo dilal ayaa ka dhaca”.